မည်သည့် Android တွင်မဆို Google Pixel XL2 ကင်မရာကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ Androidsis
[APK] Google Pixel XL2 ကင်မရာကို Android 7.0 နှင့်အထက်များမှဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ LG G6 အသုံးပြုသူများကိုသင်ကြားပေးမယ့်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတစ်ခုယူလာပေးပါတယ် Google Pixel XL2 ကင်မရာကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါလက်တွေ့ကျတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ LG G6 အတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာပါ ၎င်းသည် 7.0-bit ပရိုဆက်ဆာအသုံးပြုသည့်မည်သည့် Android 64 နှင့်အထက် terminal ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်.
သင်လိုချင်လျှင်သင်သိ LG G6 ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော HDR + မုဒ်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် LG GXNUMX ၏ကင်မရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ထို့နောက်သင်ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်ပူးတွဲတင်ပြထားသည့်ဗွီဒီယိုကိုမလွတ်သင့်ဘဲစာမူကိုဖတ်ရှုခြင်းလည်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။ ၎င်းတွင် terminal ကို root လုပ်စရာမလိုဘဲ၎င်းကိုရယူရန်သင်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုတွေ့ရမည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘယ်လောက်အမြဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် XDA developer များ၏ကြီးမားသော Android Community ငါအဘို့ဤလိုအပ်သော apks တယ်ဘယ်မှာကနေဖြစ်ပါတယ် မူရင်း Google Pixel XL6 ကင်မရာကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် LG G2 ကင်မရာကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ အဖုံးကိုအခြေခံအားဖြင့် 64-bit Processor ပါသည့် Android Nougat terminal သို့မဟုတ်မြင့်မားသောမည်သည့်အမျိုးအစားတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
မသန်စွမ်း Google Pixel XL2 ကင်မရာကို LG G6 တွင် install လုပ်ပါသို့မဟုတ်၎င်းကိုသင်၏ Android terminal တွင်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်မလားစစ်ဆေးပါ ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် link ၏ XDA ဖိုရမ်ကိုယ်တိုင်မှနောက်ဆုံး apk format ဖြင့် apd format ဖြင့်သာ download လုပ်ရမည်။ ဒီတူညီတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်.
apk ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာ၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်သင်၏ Android terminal ၏ချိန်ညှိချက်များသို့သွားရမည်။ Settings / လုံခြုံရေးမှဖွင့်နိုင်သည် ထည့်သွင်းနိုင်ပါလိမ့်ရန်ရွေးချယ်စရာ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ o မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များ.
ဤအရာပြီးသည်နှင့်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ Android package auto installer ကိုသင်ပြမည့်နေရာကိုပြရန် apk ကိုနှိပ်ပါ Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသစ်ခံစားနိုင်သည် Google Pixel XL2 ကင်မရာသည် Android 7.0 နှင့်အထက်ရှိ 64-bit ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ.
ငါဒီ post ရဲ့အစပိုင်းမှာသင့်ကိုပြခဲ့တဲ့အပြင်ငါမင်းကိုချန်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ LG G6 တွင်ကင်မရာထည့်သွင်းပုံ, ငါသည်လည်းသူကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းစွာပြသပါ HDR + မုဒ်ဖြင့်ဓါတ်ပုံမည်မျှအနိုင်ရရှိသည်အရောင်များ၏ထင်ရှားပြတ်သားမှုနှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှစ်ခုလုံးတွင်။
ငါပြောမယ်၊ ဤ Google Pixel XL2 ကင်မရာအတွက်အသုံးမပြုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုမှာနောက်ကင်မရာနှင့်အတူထောင့်ကျယ်အကျယ်အဝန်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနှောင့်အယှက်မပေးသောရွေးစရာတစ်ခုကျွန်ုပ်တွင် LG G6 ၏မူလကင်မရာရှိနေသေးသည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ထောင့်ကျယ် mode တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်လိုလျှင်မူရင်းကင်မရာ application ကိုဖွင့်လိုက်သည်။
အမှန်မှာ HDR + mode သည်ကြီးမားသောစန်းဖြစ်သော်လည်းနောက်ကင်မရာနှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများကိုများစွာတိုးတက်စေသည် LG G6 ၏ရှေ့ကင်မရာနှင့်ရိုက်ကူးထားသောဗွီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိပါမည်.
အပြီးသတ်နိုင်ရန်၊ အက်ပလီကေးရှင်းကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီရန်အခြား Android မော်ဒယ်များနှင့်အသုံးပြုသူများကို၎င်းအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါ၊ နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့် terminal အမျိုးအစား Android ကိုကြိုးစားခဲ့သည်ကိုပြောပြပါ။ ၄ င်းကိုအောင်အောင်မြင်မြင် install လုပ်ပြီးရင်၊
Google Pixel XL2 ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်သောအခါ ဒါကြောင့်သင်ကပိတ်ပစ်တွန်းအားပေးသောကြောင့်သင်အမှားတစ်ခုပေးသည်, မည်သည့်အချိန်တွင်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်မထားဘူး, ဒီဝင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် ချိန်ညှိချက်များ / အသုံးချပရိုဂရမ်များသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းခြင်း အသစ်ထည့်သွင်းကင်မရာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » [APK] Google Pixel XL2 ကင်မရာကို Android 7.0 နှင့်အထက်များမှဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
ကျွန်ုပ်တွင် android6ပါသော samsung galaxy S7.0 အစွန်း ရှိ၍ ပြုပြင်မှုများမပြုလုပ်ရ၊ ပြင်ဆင်ခြင်းမလုပ်သရွေ့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ပါသည်
၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ LG g5 တွင်တပ်ဆင်ပြီးမူရင်းကင်မရာနှင့်ခြားနားမှုမပြသည့်နေသာသောနေ့နှင့်အတူ hdr + နှင့်လေထုထဲတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့သည်။
Bq X5 plus ကိုတပ်ဆင်မထားပါ
ဝီလီ Campos ဟုသူကပြောသည်
Willy Campos ကိုပြန်ပြောပါ
Manuel Santiago Del အိန်ဂျယ် ဟုသူကပြောသည်
ပျင်းရိစေခြင်းငှါ> မ: v
Manuel Santiago Del Angel သို့ပြန်သွားပါ
Bq Aquarius U သည်အလုပ်မလုပ်ပါ
စူပါ 8 ဟုသူကပြောသည်
LeEco 1s X500 android 7.1.2 ပါရှိပြီး၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဖယ်ရှားထားပြီးဖြစ်သော cache သို့မဟုတ် application ၏ဒေတာများကိုရှင်းလင်းခြင်းပြtheနာလည်းမရှိပါ။
super 8 ကိုပြန်သွားပါ
Charli cabrera ဟုသူကပြောသည်
ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဟာ့ဒ်ဝဲမရှိပါ၊ ထိုကဲ့သို့သောဖုန်း၏ကင်မရာမရှိတော့ပါ၊ ဟားခါးတိုးတက်လာသည်၊ ထိုကဲ့သို့သောဖုန်း၏ဆော့ဝဲလ်ကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုက်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်၏မူလဖုန်းဖြစ်သောပရီမီယံ xz ရှိသည်။
Charli Cabrera အားပြန်ကြားပါ
ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်သူတို့ဟာ 835 BITS ပါတဲ့ SNAPDRAGON 64 အတွက်ပြောနေတာပါ
အရွက်! ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်မှာ Samsung note3 ဖြစ်သည်။ Android သည် ၅ ဖြစ်သည်။5။ .. ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည်လား။ ငါစာဖြင့်အဖြေကိုစောင့်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထောင်
ဟိုင်း! ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်မှာ Samsung note3 ဖြစ်သည်။ Android သည် ၅ ဖြစ်သည်။5။ .. ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည်လား။ ငါစာဖြင့်အဖြေကိုစောင့်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တထောင်
ငါကပုံတူ mode ကိုအဘို့အများအားဖြင့် galaxy s8 ပေါင်းပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးဒါဟာအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်
LG V30 သည် Daydream VR မျက်မှန်များဖြင့်စျေးကွက်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်
ဂူဂဲလ်မှ Levi's Commuter၊